Ka faa'iideysiga Mudnaanta Iibinta ayaa laba jibaar Isbaddallada Iibintaada Dibedda ah | Martech Zone
Kaliya waxaan lahadlayay todobaadkan wadahadalada SaaS oo halgan ugu jiray sidii loo shaqaaleysiin lahaa tayada wax soosaarka wax soo saarka. In kasta oo ay goolal dhalinayaan oo ay mudnaan siinayaan hoggaankooda soo gala, kooxdu inta badan way ka gaabisaa inay la xiriirto hoggaamiyeyaasha iyo wicitaankoodana waa mid cabsi leh. Waxay qaadataa nooc gaar ah oo iibiyaha ah inuu sameeyo 70 + wicitaan maalintii, laakiin taasi waa dhab ahaan waxa bilowgu u baahan yahay haddii ay rajeynayso inay waddo iibin ku filan si ay u quudiso koritaanka guuleysta.
Qaar ka mid ah arrimaha kooxaha iibka aan wax soo saar lahayn ayaa ah inaysan lahayn kala-mudnaan lagu daro hawlahooda oo kooxdooda loo daayo hawlo badan oo ay kaga shaqeeyaan mudnaanta iyaga. Tani waxay keenaysaa wicitaano yar, dhibco taabasho yar oo rajo leh, iyo - ugu dambeyn - iibin yar. Velocify waxay ogaatay in ka faa'iideysiga mudnaanta ay sameyn karto ku kordhi waqtiga hadalka maalinlaha 88% iyo laba-badal!
Awoodda kordhinta wax soosaarka kaliya kuma xirna dhaqso, xiriiradayadu waa Iibka waxay ogaadeen in hawlgallada waaweyni u baahan yihiin wareegyo iibsi oo dheeri ah oo leh dhibco taabasho oo isdaba joog ah. Haddii dhammaan kooxdaada wax iibinta ay sameynayaan ay xirayaan raadadka kulul, shirkaddaada ayaa ka maqan waxqabadyo waaweyn oo aan waligood sameyn liiska shaqada! Dhibcaha hogaaminta, soo wicitaanka wicitaanka iyo waqtiga jawaabta ayaa dhamaantood muhiim u ah xiritaanka howlaha.
Lambaradu maaha wax lagu hindhiso. Kala-hormarinta otomaatigga ah ayaa caddaynaysa wakhti iyo marba in laga caawiyo shirkadaha inay si weyn u kordhiyaan dakhliyada. Halkan waxaa ah Velocify's infographic oo muujinaya sababta hoos loogu dhigayo qaar ka mid ah kubbadaha hawada waa in lagu dhiirrigeliyaa. Waxaad kala soo bixi kartaa warbixinta oo dhameystiran, Awooda mudnaanta.
Tags: dhibcaha hogaankashaqeyn badankala hormarintaiibinta hogaanka dhibcahaiibinta hawlo badanmudnaanta iibintadhibcahaxawaaree